Wararka - Shirkadeena ayaa si guul leh ku shahaadeysay AUDITED SUPLIER iyo BSCI-AUDITED
Dhamaadka 2019, xafiiska Shijiazhuang ee shirkadeena ayaa keenaya shaqaalaha kormeerka ee shirkadda SGS ee Tianjin Branch, Waxay ku sameeyeen xisaab hubin goobta shirkadeena, Dib u eegida nuxurka waxay tixraacaysaa shatiga ganacsiga, shahaadada diiwaangelinta ganacsiga dhoofinta, maaliyadeed sanadle ah.
Bayaanka, booska xafiiska, qaabdhismeedka ururka shirkada, nidaamka maamulka iyo QC syeterm. Intaa waxaa dheer, The sidoo kale wuxuu tijaabiyay alaabteenna mid mid. Sidan oo kale gacmo gashiyo maqaar adhi ah, galoofyo harag adhi ah, koofiyadaha maqaarka, kabaha bootiyada ee carruurta adhiga ah, roogagga iyo wixii la mid ah. si guul leh loo shahaado, oo hadhow la helo warbixinta shahaadada SGS.
Isla waqtigaas, warshadda soo saarta galoofyada dhogorta adhiga ee ay shirkadeennu maalgashatay ayaa sidoo kale lagu kormeeray BSCI sanadkiiba mar.Mr Benny Wang, Maareeyaha guud ee shirkadda ayaa yimid warshadda si uu u weheliyo shaqaalaha kormeerka qiimeynta.
Kormeerayaashu waxay wareysteen shaqaalaha mid mid, wareysiga waxaa loola jeedaa nidaamka shaqaalaynta nidaamka amniga shaqada, nidaamka tababarka shaqaalaha, nidaamka mushaharka shaqaalaha, bii'ada shaqada iyo arrimo kale, waxayna sidoo kale sameeyeen qiimeyn taxane ah oo ku saabsan dhinacyada kale ee warshadda. AUDITED in 2020 sidoo kale si guul leh loo shahaado, Waa fasalka C.
Shirkadeena waxay ku adkeysaneysaa inay sameyso labadan shahaado, Waxaan u maleyneynaa inay tahay masuuliyadeena, masuuliyada bulshada.iyo waliba balanqaadka dhamaan macaamiisheena. Fikradaheena wax soo saar waa inaan sii wanaajinno, ma ahan oo keliya raadinta fudeyd & xarrago, sidoo kale farshaxan aad u fiican.Si la mid ah galoofyada adhiga ee nalalka ah. Laga soo bilaabo isha, kaliya waxaan isticmaalnaa.
Maaddada Merino ee maqaarka adhiga ku jirta, kuma jiraan maadada 'formaldehyde' iyo walxaha kale ee waxyeellada leh.iyo qayb kasta oo harag adhi ah ayaa si taxaddar leh loo xushay. .Waxaan si faahfaahsan u sameyn doonaa.Waxaan sidoo kale ku adkeysaneynaa inaan si fiican u qabanno adeegyada iibka kadib, Waxaan ballan-qaadaynaa haddii ay leeyihiin galoof cillad leh, waxaan cusub kuugu samayn doonnaa bilaash!
Xusuus-qorka: Sirta ganacsiga awgeed, qayb uun ka mid ah waxyaabaha ku jira ayaa la soo bandhigayaa. Fadlan si naxariis leh u faham.